२५ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्‍यो । संख्यात्मक हिसाबले त नेपालमा त्यतिबेलासम्म कोरोनाबाट दुई जना संक्रमित भएका थिए ।
लामो समय घरभित्र थुनिएपछि दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खानेहरुको घरमा चुलो बल्न छाड्यो । उनीहरुलाई खाना खुवाउन सहयोगीहरु हातहरु पनि अगाडि आए । देशभर झण्डै २५ हजार सदस्य रहेको राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपालले भने तयसो गर्न सकेन ।
काठमाडौंमा कीर्तिपुरको सुन्दरीघाट र सामाखुसीमा रहेको आश्रममा सत्संग बन्द थियो । भक्तजनहरू आफ्नै घरमा थिए । आश्रमको मध्य नेपालको क्षेत्रका प्रमुख कृष्ण दाहाल भन्छन् ‘चाहँदा चाहँदै पनि हाम्रो विधानमा भएको व्यवस्थाका कारण अरूले जसरी बाहिर निस्किएर सहयोग गर्न सकेका थिएनौं ।’
स्थानीय प्रशासन होल्डिङ सेन्टरको खोजीमा जुट्यो । केही घण्टाका लागि राख्न त पार्टी प्यालेसहरु भेटिए तर पीसीआर रिपोर्ट नआउँदासम्म खाने र बास बस्ने व्यवस्था कहाँ गर्ने भन्ने समस्या भयो । यस्तो स्थानको खोजीका क्रममा जेठको दोस्रो साता काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अघिकारी जनकराज दाहाल, प्रहरी प्रमुख श्यामप्रसाद ज्ञवालीसहित ४ सदस्यीय टोली कीर्तिपुरस्थित शाखा कार्यालयमा पुग्यो । र, उनीहरुले सत्संग आश्रमको संरचनालाई होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमति मागे ।
सत्संगका प्रमुख दाहाल भन्छन् ‘उहाँहरूले ‘चौतारी’को रूपमा आश्रमलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो भन्नु भएको थियो । उहाँहरूको आवश्यकता र हाम्रो सेवाको चाहना मिल्यो, त्यसपछि हामीले होल्डिङ सेन्टरको रूपमा आफ्नो आश्रमको संरचना तयार पार्ने अनुमति दियौं ।’
आइतबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित ‘कोरोना रोकथामबारे सरकारको काम कारबाही अध्ययन उपसमिति’ले सिंहदरबारमा तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो । सो बैठकमा काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले काठमाडौंको इज्जत जोगाएको भन्दै राधास्वामी सेवा आश्रमको प्रशंसा गरे ।
बाहिरबाट ल्याउनेहरूलाई पनि पीसीआर नेगेटिभ आयो भने घर पठाउने र पोजिटिभ आएकोलाई आइसोलेसनमा लैजाने भएकोले त्यो वास्तवमै केही दिनको लागि मात्रै राख्ने ‘चौतारी’ कै रूपमा प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको योजना थियो । त्यो आफैँमा खर्चालु काम पनि थियो । तर प्रस्ताव गर्न गएका चार जनालाई अचम्ममा पार्ने गरी आश्रमका सञ्चालकले बस्न मात्रै नभएर सकेको दिनसम्म खाना खुवाउने बतायो ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को तर्फबाट खानाको लागि प्रतिव्यक्ति एक छाकको १७५ रूपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने प्रजिअ दाहालले बताएका पनि थिए । तर आश्रमले सरकारी सो सहयोग नलिने सुनाएर सकेको दिनसम्म आफ्नै तर्फबाट खाना खुवाउने बताएको थियो ।
‘आश्रमको मुख्य मान्यता भनेको नै आफ्नो घरमा आएका जोकोही पाहुनालाई भोकै पठाउनु हुन्न भन्ने हो । ‘सेवा ही परमोधर्म’ नै हाम्रो मुख्य मन्त्र हो’ प्रमुख दाहाल भन्छन् ‘हामीले जे गर्‍यौं एउटा आध्यात्मिक संस्थाले गर्नैपर्ने कर्तव्य गरेका हौं । अरू केही पनि होइन ।’
जेठ १६ गते सरकारले विदेशबाट नेपाली ल्याउने र भारतको समेत २० वटा नाकाबाट नेपालीलाई भित्र्याउने निर्णय गर्‍यो । भारतबाट आएकाहरूलाई कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित आश्रमको शाखामा राख्ने र तेस्रो देशबाट आएकालाई सामाखुसीमा राख्ने निर्णय गरियो ।
त्यहाँ होल्डिङ सेन्टर बनाउने योजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको नै थियो । कुरा मिले पनि डीसीसीएमसीको आधिकारिक पत्र आउन केही दिन लागेको थियो । तर सो पत्र आउनुपूर्व नै आश्रमले नै बारबेर गरेर पाहुना राख्ने व्यवस्था मिलाउन थालिसकेको थियो ।
स्यानिटाइज गर्न आवश्यक पर्ने सकै सामान नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सहयोग गर्‍यो, पानी ट्यांकी र त्यहाँको लागि साबुनहरू र ब्ल्यांकेटहरू पनि रेडक्रसले नै दियो । केही ब्ल्यांकेट नेपाल प्रहरीले पनि सहयोग गरेको थियो ।
बेरबार गर्न त्रिपाल कुनै प्रहरी र कुनै रेडक्रसबाट मिल्यो । बाँकी आवश्यक सामग्री प्रशासन, प्रहरी र रेडक्रस जहाँ जे छ त्यतैबाट ल्याइयो । पहिलो चरणमा भारतबाट आएका ३०० जनालाई कीर्तिपुरमा राखियो ।कस्तो थियो खानाको व्यवस्था ?
आश्रमका प्रमुख दाहाल होल्डिङ सेन्टरमा आएर बस्नेहरूलाई ‘पाहुना’ भन्न रूचाउँछन् । उनका अनुसार पाहुनाका लागि तातो पानी र १३ वटा जडीबुटी मिसाएर बनाइएको पानी २४ घण्टै उपलब्ध थियो ।
खाजाको रूपमा चिया र मठ्ठा(बिस्कुट जस्तै आकारको तर बाक्लो एक किसिमको आश्रममा बढी प्रयोग गरिने खानेकुरा हो) दिने गरिन्थ्यो ।
बिहान साढे १० बजे खानाको समय हुन्थ्यो । खाना र खाजाको लागि निश्चित समय तालिका भित्तामा टाँसेर नै राखिएको हुन्थ्यो । खानामा दालभात तरकारी रोटी र अचार दिने गरिन्थ्यो । अचार बाहिर किनेको नभई आश्रममा नै बनाउने गरिन्थ्यो । अचारकै लागि कागती विभिन्न ठाउँबाट २ क्विन्टल ल्याइएको थियो, बुटवलको केन्द्र र कोही संगतकोमा फलेको आँप, काभ्रेको दाप्चामा रहेको आश्रमकै शाखाबाट लप्सी, र दोलखा शाखाबाट अमला ल्याएर अचार बनाइएको थियो ।
चौतारीको रूपमा प्रयोग गर्न मागेको आश्रममा पाहुनाले आफूलाई आवश्यक पर्नेजति दिन बस्न सक्ने सूचना दिइएको थियो । आश्रम प्रशासनका अनुसार थोरै बस्ने ५ दिनदेखि धेरैदिन बस्नेले १८ दिनसम्म आश्रममा दिन बिताए ।
कतिलाई खुवायो आश्रमले खाना ?
आश्रमले दिएको तथ्यांक अनुसार आश्रमको दुईवटा शाखामा मात्रै कुल ५३०६८ थाली खाना वितरण भएको छ भने ३३२५ प्याकेट लन्च बक्स आश्रमबाट बाहिर लगिएको थियो । आश्रमबाट बाहिर भन्नाले विदेशबाट आएकाहरूलाई नै इचंगुनारायण र काठमाडौंकै केही पार्टी प्यालेसमा समेत राखिएको थियो । त्यहाँ खानाको व्यवस्था नभएको अवस्थामा आश्रमसँग खाना र खाजाको माग गर्ने गरिन्थ्यो ।
तर मौखिक रूपमा भने एक महिनासम्म सो सेवा बन्द नगरीदिन सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह अनुसार अहिले पालो दिनको लागि समेत पोखराबाट समेत सेवाग्राहीलाई बोलाएर आश्रमले सेवा दिइरहेको छ । आश्रमको विधान आदिको कारणले पनि सरकारले दिएको सहयोग झट्ट लिन सक्ने अवस्था नरहेको दाहालले जानकारी दिए ।